18 dagaalyahan oo katirsan Al-Shabaab oo lagu dilay duqeyn uu Mareykanku ka geystay meel u dhow Kismaayo - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaJubaland18 dagaalyahan oo katirsan Al-Shabaab oo lagu dilay duqeyn uu Mareykanku ka geystay meel u dhow Kismaayo
September 22, 2018 Puntland Mirror Jubaland, Somalia 0
Maleeshiyada Al-Shabaab. [Sawirka[
Kismaayo-(Puntland Mirror) Milatariga Mareykanka ayaa sheegay in ay qaadeen duqen ka dhan ah maleeshiyada Al-Shabaab ee gudaha Soomaaliya, waxaana lagu dilay 18 dagaalyahan.
Weerarka ayaa ka dhacay meel qiyaastii 50 kiiloomitir dhanka waqooyi-galbeed kaga beegan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose, sida ay bayaan ku sheegeen taliska Mareykanka ee Afrika maanta oo Sabti ah.
Tani waa duqeyntii shanaad oo ka dhan ah Al-Shabaab intii lagu guda jiray bishaan September, oo uu Mareykanku qaaday.
July 23, 2018 Al-Shabaab oo sheegay in ay ku dileen 27 askari weerar ay ku qaadeen saldhig ciidan oo ku dhow Kismaayo
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha cusub ee dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kulan la qaatay safiirka dalka Mareykanka u fadhiya gudaha Soomaaliya Stephen Schwartz. Kulanka ayaa maanta oo Jimce ah ka dhacay xarunta madaxtooyada Villa [...]